Telestream Mahazo ContentAgent | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Telestream Mahazo ContentAgent
Telestream Mahazo ContentAgent
Nevada City, Kalifornia, Martsa 31, 2021 - Telestream, orinasa portfolio an'ny Genstar Capital ary mpamatsy fitaovana fampahalalam-baovao nomerika ary vahaolana amin'ny workflow, androany dia nanambara ny fahazoana ContentAgent avy amin'ny Vecima Networks. ContentAgent dia rindrambaiko ampiasain'ny eran-tany fampielezam-peo avo indrindra, orinasan'ny famokarana ary trano famoahana streamline workflows famoronana votoaty. Ny ContentAgent dia namboarina mba hanaovana automatique asa iraisana toy ny fihinana karatra fakan-tsary ho an'ny ekipa fanonta ary hamoronana fanaterana miorina amin'ny rakitra toy ny master broadcast ary mijery kopia.
"ContentAgent dia nahavita tsara tamin'ny famokarana sy ny tsenan-pamokarana aorian'izay ary mikasa ny hanatsara ny fampandrosoana hatrany izahay ary hampiasa ny tanjany rehefa manohy mivelatra amin'ny tsena fanampiny ao anatin'izany ireo masoivoho mpamorona sy orinasa orinasa", hoy ny fanamarihana nataon'i Dan Castles, CEO an'ny Telestream.
“Tena faly izahay fa hiditra amin'ny Telestream fianakaviana ary manantena ny hahita ContentAgent mandray anjara Telestreamfitomboana mitohy, ”hoy i Owen Walker, Tale, ContentAgent.
Miaraka amin'ny fisehon'ny mpampiasa sary manaitaitra azy, ny ContentAgent dia manadino ny fampahalalam-baovao izay manamora ny fifindrana amin'ny famokarana an-tsaha ka hatramin'ny fizotry ny famokarana. Izy io dia mitondra fahombiazan'ny fanodinana haino aman-jery ho an'izay mamorona atiny ho an'ny sehatra media vaovao sy ny fifandraisana eo amin'ny orinasa.
Ny ekipa ContentAgent, miorina voalohany indrindra any Angletera, dia ho tafiditra tanteraka ao Telestream fianakaviana. Ireo mpanjifa efa misy dia afaka manantena ny hahita loharano fanampiny aparitaka hanohanana ny ContentAgent erak'izao tontolo izao.
Previous: Burrell Taps Ny ekipan'ny Colonie hanangana ny fantsona vaovao an'i Xfinity, 'Black Experience'
Next: Mampiharihary tsara ny 'Emotions', Perfume Vaovao hanampiana ireo tonian-dahatsoratra sy mixers maimbo tahaka ny feony